Shabakadda Amiirnuur – Page 85
Janaraal Gorod: “Waxaan Qabanay Ciidamo Bililiqeysanayay Xeradii Imaaraadku Ka Guuray.
Taliyaha ciidamada milatariga DF, Janaraal Cabdiweli Jaamac Gorod, ayaa sheegay in ay qabteen askar ka tirsan ciidamada dowladda oo ku hawlanaa iney bililiqeystaan ama boobaan keydka xerada Jen Gordan. Wuxuu ka dhawaajiyay in uu jiray dagaal toos ah oo ka dhacay xerada kaddib markii ay halkaas soo gaareen cutubyo ka […]
Madixii golaha sare ee Xuuthiyiinta oo ku dhintay duqeyn ka dhacday dalka Yaman.
Kooxda Xuuthiyiinta ee ka dagaallanta wadanka Yaman ayaa shaaca ka qaaday inuu dhintay mid kamid ah saraakiisheeda ugu sarreeya ee hogaaminayay malleeshiyaadka Xuuthiyiinta. War kooban oo lagu baahiyay tvga Al-masiira oo ku hadka Afka Xuuthiyiinta ayaa lagu sheegay in madixii golaha sare ee Xuuthiyiinta Saalax As-samaad uu ku dhintay khamiistii […]
Amiirka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab Sheykh Axmad Cumar Abuu Cubeydah –Xafidahullaah- ayaa jeediyey kalimad uu kaga hadlayo xaaladda dhulka barakeysan ee Shaam oo sanado xiriir ah wajahaya duullaan wuxuushnimo oo ay hor kacayaan saliibiyiinta galbeed iyo kuwa bari oo kaashanaya dabadhilifyadooda gobolka. Kalimadan oo la dhageysan karo muddo 29 daqiiqo ah […]